NIN LA HAAYO NIMUU HAAYO, WAA HILIB HAAD U YAAL
Mohamed-Deeq Abadi-madar �Haldhaa�
Nin Swedish ah oo arrimaha Soomaaliyana aad u xiiseeya oo aannu maalin ku sheekaysanaynay meel maqaaxi ah oo ku taal magaalada Borl�nge ee waddanka Sweden ayaa wuxuu ila soo hadal qaaday dib u heshiisiinta Soomaaliya ee lagu qabanayo Magaalada Muqdisho. Wuxuu igu yiri:-
- Waxaan maqlay in aad Afrika aadaysid ee miyaad ka qeyb galaysaa shirka Muqdisho?
- Maya kam qeyb galayo.
- Sababtu maxay tahay?
- Waxaan jirin ammaan.
- Oo dowladdu miyaysan ammaanka sugin?!
- Dowlad ammaan sugi kartaa kam ajirto meessha, intaan idhi ayana qosolna ku daray.
Ninkii saaxiibkay ahaa wuxuu la yaabay qosolka meesha uu ka soo galay arrinta dhanta ee ammaanka ku saabsan ee ananu ka wada hadlaynay. Marka waxaan ku idhi. Waxaan ku qoslay sida aadan ula socon xaqiiqada ka jirta meesha, ee uu warkaagu ugu koobanyahay wararka ay saxaafadda caalamku ka qoraan Soomaaliya. Runtii wuu garoowasaday in xog badani ay ka maqantahay, laakiin kama madhnayn inuu wali ku kalsoonyahay wararka saxaafadda caalamka ay ka qoraan Soomaaliya.
Anigoo hadalkii sii wadda ayaan u sheegay in qolooyinka dowladda isku sheegayaa aysan waxba ka ahayn Muqdisho miyo Soomalaiyaba ee cidda dhulka haysataa ay tahay Itoobiyaanka. Iyagaas ayuunbayna nabad iyo colaad ka go�daa. Waliba aliflaha Itoobiyaanka ah ayaana ka awood badan Cabdullaahi iyo Geeddiba. Waxayna xabshidu samayn karaan hadba wixii ay doonaan. Taasoo macnaheedu yahay qofkii ay doonaan ayay dilayaan ama xirayaan ama dhacayaan. Iyagoon waliba waxba ka ogaysiina ama aan dan ka galin kuwa dowladda isku sheegaya.
Waxaan kaloon u sheegay in haddii ay Soomaali oo qura ahaan lahaayeen cida talada haysa inay dhici lahayd wuxuun in lagu heshiiyo. Laakiin taasi maysan dhicin. Oo waxaa meesha ka taliya ciidamada Itoobiyaanka.
Markaan intsaa u sheegay ayuu igu yimi:-
- waxaan ayana dhoway wargeys ka akhriyay inya dowladdu damaano qaadday ammaanka ergooyinka shirka imaanaya ciddey doonaanba ha noqdeenee.
- Waa runtaa. Laakiin waxaad hilmaantay inaysan waxba gacanta ugu jirin.
- Way dhici kartaa. Lakaiin waa dawlad la aqoonsaday.
- Way kula tahay.
Markaan cabbaar arrintaas uun ka wada sdoodaynaya ayaa waxaa markii danbe igu soo dhacay shirib uu nin soomaaliyeed hadda ka hor yiri.
�Nin la haayo, nimuu haayo
Waa hilib, haad u yaal�
Taasoo macnaheedu yahay kuwa dawladda isku sheegayaa iyagaa la hayaa oo muqdisho iyo Soomaaliyaba nagan ku ah. Ninkii ay sii magan galiyaanna waa nin dayacan oo wuxuu la macno yahay �Hilib haad u yaal�.
Ninkii saaxiibkay ahaa aad buu ula dhacay daliilkaygii danbe. Doodiina halkaas ayaannu maalintaasu joojinay anigoo waliba kaga guulaystay.
The Somali Social Democrats� Party (SSDP)